ဆေးဝါးအလယ်အလတ်နှင့် APIs ၏ Phcoker ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံ
Tadalafil အမှုန့်ကို အစုလိုက် ထုတ်လုပ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Powder
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hcl Powder
Orlistat Pwoder အစိမ်း
Immunoglobulin G (IgG)၊
SEA Cucumber Peptide Powder ၊
Tadalafil အမှုန့် (171596-29-5)
တက်ကြွသောဆေးဝါးအလယ်အလတ် (APIs) ကိုအထူးပြုသည့်လုပ်ငန်း
ISO9001: 2000 စည်းမျဉ်းများနှင့်အ cGMP စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှု။
R & D အဖွဲ့
အလုံအလောက် related နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ 20 နှစ်ပေါင်းဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုထက်ပို။
နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ Shangke ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအလွန်ထိရောက်သောနှင့် Eco-ဖော်ရွေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းအချိန်မီ client များအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာအပြည့်အဝနည်းပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာထောက်ခံမှုပေးသည်။
Ursodeoxycholic acid (UDCA) အမှုန့်
Tadalafil အမှုန့် (၁၇၁၅၉၆-၂၉-၅)၊
Chenodeoxycholic Acid (CDCA) အမှုန့်
7,8-dihydroxyflavone (38183-03-8) အမှုန့်
5a-hydroxy laxogenin အမှုန့်
Palmitoylethanolamide ဖြည့်စွက် - PEA နာကျင်မှုအတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
1. Palmitoylethanolamide (PEA) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 2. Palmitoylethanolamide (PEA) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 3. Palmitoylethanolamide အကျိုးကျေးဇူးများ – ဘာလဲ...
နောက်ဆုံးပေါ်အိုမင်းရင့်ရော်စေသောဆေးဝါးများ - နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်ကူလိုotide (NMN)
1. နိဒါန်း 2. လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Nicotinamide Mononucleotide (NMN) 3. Nicotinamide Mononucleotide နှင့် NAD+ 4. နောက်ဆုံးထွက် Res...
Phcoker သည် အမြောက်အများ အာမခံနိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖြင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် L-threonate ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ...
Galantamine Hydrobromide ခြုံငုံသုံးသပ် Galantamine hydrobromide သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးညွှန်းဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
PRL-8-53 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PRL-8-53 သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နီကိုလပ်ဟန့်စ်, C ၏ပါမောက္ခ ...
Cycloastragenol ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် T-65 ဟုလည်းလူသိများသော Cycloastragenol (CAG) သည် Astr မှရရှိသောသဘာဝ tetracyclic triterpenoid ဖြစ်သည်။
Nicotinamide riboside (NR) နှင့် nikotinamide riboside (chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride သည်ကလိုရင်း (n) တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Oxiracetam ဆိုတာဘာလဲ။ Oxiracetam သည် racetam မိသားစုမှ nootropic ဖြည့်စွက်ဆေးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတတိယ racetam com ဖြစ်ခဲ့သည် ...
9-ME-BC ဆိုတာဘာလဲ။ 9-MBC ဟုလည်းလူသိများသော 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) သည်β-carboline အုပ်စုမှအသစ်သော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...